မိုနိုပိုလီ 1.1.0 - MOD APK Downloader - for android
မိုနိုပိုလီ Android app theupdatess unlimited Hacks Miracle Dice – မိုနိုပိုလီ ZingPlay ဆိုသည်မှာ အိမ်ခြံမြေစျေးကွက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများကို မဟာဗျူဟာမြောက်စွာ စဉ်းစားတွေးတော၍ ကမ္ဘာအထင်ကရနေရာများကို ရောင်းဝယ်ကစားကြသော ဂိမ်းဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ ကစားနေကြ ရိုးရာကစားနည်းဖြစ်သည့်မိုနိုပိုလီ ကစားနည်းနှင့်အတူ မှော်အံစာကို ကစားရန် အံစာနှစ်တုံးသာလိုအပ်ပြီး အံစာများကို ခေါက်ကာ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် ခရီးစဉ် ကို စတင်နိုင်ပြီး ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု စွမ်းရည်ကို ကစားခုံပေါ်မှာ ပြသနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
unzip data and copy com.vng.ctp.mm folder into android / obb (internal storage)
OBB file (မိုနိုပိုလီ) isafile that developers create along with some APK packages to support the application. The OBB files contain bundles of large assets.
မိုနိုပိုလီ Modded Apk: